​सेती नदीमा हामफालेकी किशोरी बेपत्ता
पोखरा । पोखराको लेखनाथ महानगरपालिकाको रामघाटस्थित सेती नदीमा आइतबार साँझ एक किशोरी हामफाली बेपत्ता भएकी छिन् ।
बेपत्ता हुनेमा रामबजार स्थित कालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ९ मा अध्ययनरत १४ वर्षकी अग्नि गुरुङ रहेकी छिन् । गुरुङले हामफाल्नुअघि एक सुसाइट नोटमा ‘मेरो शरीरलाई कसैले....
​रामधुनी मन्दिरको प्रवद्र्धन र विकासका लागि बृहत कार्ययोजना
रामधुनी । ऐतिहासिक धार्मिक तिर्थस्थलको रुपमा रहेको सुनसरीको रामधुनी मन्दिरलाई विकास र प्रवद्र्धन गर्नका लागि बृहत कार्ययोजना बनाइने भएको छ ।
रामधुनी नगरपालिका वार्ड नं. ४ स्थित रहेको रामधनुी मन्दिरमा पछिल्लो समय विकासमा गति लिइरहेको र अब प्रचारका साथै महत्वपुर्ण कार्यहरु सम्पन्न गर्नका लागि....
​दुई किलो सुनसहित तीन पक्राउ
नेपालगन्ज । नेपालगन्जस्थित एक होटलबाट प्रहरीले करिब दुई किलो ३०० ग्राम सुन सहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रक्राउ पर्नेमा बाँके बैजापुरका मंगलप्रसाद थारु, सिन्धुपाल्चोकका कृष्णलाल श्रेष्ठ र जाजरकोटका पूर्णबहादुर विक रहेका छन् ।
रोयल प्यालेस होटलबाट प्रहरीले सुराकीका आधारमा शनिबार राति होटलको....
​महोत्तरी डाइक्लोफेनेक मुक्त जिल्ला घोषणा, गिद्ध संरक्षणमा जोड
महोत्तरी । महोत्तरीमा गिद्ध संरक्षण गरी उपस्थिति बढाउनमा जोड दिइएको छ । गिद्ध पनि मानव जातीका ला िगिद्ध प्रकृतिको अभिन्न अंग भएकाले पर्यावरणीय सन्तुलिट राख्नका लागि यसको संरक्षणमा जोड दिइएको हो ।
पशु विकास कार्यालय महोत्तरीले गिद्धको संरक्षणको लागि विन्नि उपायहरु अपनाउनुपर्ने निश्कर्ष निकालेको....
​मृतकका परिवारले पाए राहतस्वरुप २ लाख
इटहरी । सुनसरी प्रशासनले गतसाता इटहरीस्थित बूढी खोलामा आएको बाढीका कारण ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुली सहितको टोलीले मृतकका परिवारलाई भेटेरै सरकारी राहत वापतको २ लाख रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराएको हो । सुनसरी प्रशासनले बाढीका कारण....
​बढीका कारण झापाका ३२ विद्यालयमा क्षति
झापा । गतासाता आएको बाढीले झापाका ३१ वटा सामुदायिक विद्यालयमा क्षति पु¥याएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय झापाले दिएको जानकारी अनुसार मावि, आधारभुत र प्रावि गरी ३१ वटा विद्यालयमा गरी करिव ४० लाख रुपैयाँको क्षति पुगेको हो । सबै भन्दा बढी क्षति झापा गाउँपालिकामा रहेका सामुदायिक....
दर खाने रकम बाढीपिडितलाई
विराटनगर । समय आउनु अघि देखि नै तामझामका साथ तिज मनाउने प्रचलन बढ्दै गएका बेला विराटनगरमा महिलाहरुको एक समूहले भने फरक शैली अपनाएको छ । विराटनगर महानगरपालिका– ४, आदर्श टोलका महिलाहरुले सामुहिक रुपमा दर खान संकलन गरेको रकम सोहि वडाको इक्राहिको यादव बस्तिका बाढीप्रताडितका लागि....
​महानगरको फोहोर सफा गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालित
विराटनगर । एकसाता अघि आएको बाढीका कारण प्रदुषित बनेको विराटनगर महानगरपालिकाको नगर क्षेत्रको सरसफाईमा सुरक्षाका तीन वटै निकाय परिचालित भएका छन् । शनिवार विराटनगरको हाटखोला क्षेत्रबाट सरसफाई सुरु भएको हो ।
शनिवार विराटनगरको बजार क्षेत्रका सडकहरुमा सुरक्षाका तीन वटै निकायले सडकको फोहोर सफा गरेका....
आगो निभाउने क्रममा करेन्ट लागेर एक महिलाको मृत्यु
धनकुटा । घरमा लागेको आगो निभाउने क्रममा धनकुटामा करेन्ट लागेरे एक महिलाको मृत्यु भएको छ । धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर १० धर्मशालाकी ३६ बर्षिय रिता अधिकारीको करेन्ट लागेर आइतबार मृत्यु भएको हो ।
आफ्नै घरमा आगलागि भएपछि आगो निभाउने क्रममा करेन्ट लागेर अधिकारीको मृत्यु....
​इटहरीमा खुल्यो इलिगेन्स सर्टिङ्ग सुटिङ्ग
इटहरी । पुर्वाञ्चलको केन्द्रविन्दु इटहरीमा इलिगेन्स सर्टिङ्ग, सुटिङ्ग र टेलरिङ्गको सुभारम्भ भएको छ ।
आइतबार इटहरी उपमहानगरपालिका वाड नं. ६ का वाडा अध्यक्ष दिपक गौतमको हातबाट रिवन काट्दै टेलरिङ्गको सुभारम्भ गरिएको हो ।
इटहरीमा सर्टिङ्ग, सुटिङ्ग र टेलरिङ्गकोलागि विश्वनिय स्थान नभएको भन्ने ग्राहकको....